Madaxwaynaha Puntland oo qaabilay wafti sare oo kasocda Midowga Yurub +Sawirro – SBC
Madaxwaynaha Puntland oo qaabilay wafti sare oo kasocda Midowga Yurub +Sawirro
Posted by Webmaster on April 17, 2013 Comments
Madaxwaynaha puntland Cabdiraxmaan maxamed Maxamuud Faroole ayaa maanta magaalada Garoowe waxa uu kuqaabilay wafti balaaran oo kasocda Midowga yurub.
Waxana wafdigaani horkacaysay agaasimaha Bariga iyo Koonfurta Afrika ee midowga Yurub Francesca Mosca,waxana sidookale kuwehliyay safarkooda safiirka EU u qaabilsan Somalia Michele Cervone iyo sidookale saraakil kale .
Soodhawyn kadib madaxwayanah puntland waxa uu kulamo laqaatay madaxdaasi waxana kalaqayb galay kulamadii madaxwayne faroole laqaatay waftigaasi Madaxwayne kuxigeenka puntland cabdisamad cali shire,wasiirka arimaha gudaha iyo horumarinta dowladaha hoose cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir iyo sidookale wasiirka waxbarashada puntland cabdi faarax juxa .
Madaxwayanaha puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa sheegay in intii ay kuwada jireen kulanka uu maanta laqaatay wafdiga kasocda midowgaa yurub ay kawada hadleen arimo ay kamid ahaayen arrimaha Somalia ,xiriirka DF iyo maamulada jira iyo kuwa dhalanaya ,amaanka guud ahaan iyo nidaamka xisbiyada badan ee Puntland u gudubtey.
”Waxa la badelayaa nidaamkii mucaawinooyinka loo siin jirey Somalia maadaama KMG-kii laga baxay,waxana ka wadahadalney qaabka loola dhaqmayo Somalia iyo sidii nidaamka cusub loo hirgelin lahaa” ayuu yiri madaxweynuhu.
”Waxaan u nimid inaan baahiyaha ogaano guud ahaan Somalia ka dibna iska aragno deeq bixiyaasha sidii aan uga caawin lahayn Somalida”ayay tiri Francesca Mosca,waxana ay raacisey in shir Belgium ka ka dhici doono 16 September kaasi oo ka qaybgali doonaan 19 dal oo Somalia ka mid tahay oo ka soo kabanaya nidaam darada.
Wafdigaan ayaa shalay gaaray magaalada muqdisho iyagoona kulamo laqaataya Raysul wasaaraha dalka soomaliya waxana ay kala hadleen arimo laxiriira horumarka soomaliya .